Ise Foto: Otú E Si Ese Foto Ndị E Ji Akọwa Ihe E Dere n’Akwụkwọ Anyị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bislama Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Fante Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norwegian Oromo Otetela Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Telugu Thai Tigrinya Turkish Tzeltal Ukrainian Urdu Valencian Yoruba Zulu
Olee otú ndị na-ese foto ndị na-adị n’akwụkwọ anyị, bụ́ ndị na-akọwa ihe ndị e dere na ha, si ese ha? Iji mata otú ha si eme ya, ka anyị kọwaa ihe ndị e mere tupu e see foto gbara n’ihu Teta! Septemba afọ 2015 na otú e si see ya. *
Otú ọ ga-adị tupu e see ya. Mgbe ndị na-ese ihe na Ngalaba Na-ahụ Maka Ihe Ndị A Na-ese n’Akwụkwọ Anyị gụchara isiokwu Teta! bụ́ “Otú E Kwesịrị Isi Na-ele Ego Anya,” ha sere otú foto ndị ha chere ga-eme ka a ghọta isiokwu a ga-adị. Ngalaba a dị n’Ogige Ụlọ Akwụkwọ Watchtower dị na Patasịn, Niu Yọk. Ha wegaara Kọmitii Ide Ihe nke Òtù Na-achị Isi foto ndị ahụ ha sere. Ọ bụzi Kọmitii a họọrọ nke a ga-ese ga-agba n’ihu akwụkwọ a.
Ihe a bụ ụfọdụ n’ime foto ndị na-agba n’ihu akwụkwọ anyị Kọmitii Ide Ihe lebarala anya
Ebe e sere ya. Ndị sere foto ndị ahụ anọghị n’ezigbo ụlọ akụ̀ see ha. Ha nọ n’ebe e doziri ka o yie ụlọ akụ̀ n’otu n’ime ebe a na-anọ echere ndị mmadụ n’Ogige Ụlọ Akwụkwọ Watchtower see ya. *
Ndị e sere na ya. Ndị niile e sere n’ihu Teta! ahụ bụ Ndịàmà Jehova. A họọrọ ha ka ha yie ndị ahịá nke otu ụlọ akụ̀ dị́ n’obodo mepere emepe. E deturu aha ha n’akwụkwọ ka ọ ghara ịbụ naanị ha ka foto ha ga na-agba n’akwụkwọ anyị.
Ihe Ndị E Sere na ya. Ngalaba Na-ahụ Maka Ihe Ndị A Na-ese n’Akwụkwọ Anyị gara weta ego ndị mba ọzọ ka o yie ka à nọ n’ụlọ akụ̀ dị́ n’obodo na-abụghị Amerịka. Ndị sere foto ahụ gbara mbọ mee ka ihe ndị e sere ebe ahụ yie otú ụlọ akụ̀ na-adị. Otu onye so ná ndị na-ese foto na-agba n’akwụkwọ anyị aha ya bụ Craig kwuru, sị: “E nweghị ihe e leghaara anya.”
Uwe ha yi na ihe ha ji chọọ onwe ha mma. Uwe niile ndị e sere n’ụlọ akụ̀ ahụ yi bụ nke ha. Ma, ọ bụrụ na ihe a chọrọ ise bụ ihe mere n’oge ochie ma ọ bụkwanụ ihe a chọrọ ka ndị a ga-ese na ya yiri uwe pụrụ iche, Ngalaba Na-ahụ Maka Ihe Ndị A Na-ese n’Akwụkwọ Anyị nwere ike ime nchọnchọ chọpụta ákwà kwesịrị ekwesị ha ga-eyi ma dụọ ya. Ndị bụ́ aka ochie n’ịchọ mmadụ mma na-achọ ndị foto ha ga-agba n’akwụkwọ anyị ahụ mma. A na-achọ ha mma ka ọ daba n’ihe a na-akọ akụkọ ya nakwa n’oge ihe ahụ a na-akọ akụkọ ya mere. Craig kwuru, sị: “N’ihi otú kamera ndị e nwere ugbu a si eseta ihe niile nke ọma nakwa n’ihi otú kọmputa ndị e nwere ugbu a si egosi foto nke ọma, anyị na-asa anya ná mmiri mgbe anyị na-ese foto ndị ahụ, n’ihi na anyị sejọọ ya, ya emebie.”
Ise foto. Ndị sere foto ahụ gbara n’ihu Teta! ahụ hụrụ na ọkụ ndị e ji see ya gosiri na mgbe e sere ya bụ n’ehihie. Na foto nke ọ bụla a na-ese, ndị na-ese ya na-ahụ na ụdị ọkụ ndị e ji see ya kwesịrị ekwesị. Nke a pụtara na a chọọ ise ihe mere n’oge anwụ na-acha, e jiri ọkụ ga-eme ka o yie ka anwụ ọ̀ na-acha see ya. A chọọkwanụ ise ihe mere n’oge ọnwa na-agba, e jirikwa ọkụ ga-eme ka o yie ka ọnwa ọ̀ na-agba see ya. Ọkụ ndị ahụ ga-adabakwa n’ụdị ihe a na-egosi na foto ahụ. Craig kwuru, sị: “Otú ọkụ dị na foto si acha dị ezigbo mkpa n’ihi na ọ bụ naanị otu foto ahụ ga-akọwa ihe niile gbasara ihe ahụ e sere. Ma, ọ dịghị otú ahụ na vidio.”
Imezi foto ndị e sere ese. E mechaa, ndị na-emezi foto ndị e sere ese mere ka a ghara ịma mba nwe ego ahụ gbara n’ihu Teta! ka ndị na-agụ ya lekwasị anya ná ndị e sere ebe ahụ kama ilekwasị anya ná mba ndị nwe ego ahụ. Ọ bụ eziokwu na ụzọ na windo ndị e sere na ya na-acha ọbara ọbara, a gbanwere ha ka ha chawa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Nke a mere ka foto gbara n’ihu Teta! ahụ na ụcha ya bụrụ otu.
Ọ bụghị naanị na Patasịn ka a na-ese foto ndị na-agba n’akwụkwọ anyị. E nwekwara ndị na-ese foto n’alaka ụlọ ọrụ anyị dị iche iche n’ụwa. E nwekwara ike ịgwa ha ka ha seta foto ndị ga-agba n’akwụkwọ anyị. Alaka ụlọ ọrụ ndị ahụ dị na Brazil, Ọstrelia, Kanada, Jamanị, Japan, Koria , Malawi, Meksiko, na Saụt Afrịka. N’ọnwa ọ bụla, Ngalaba Na-ahụ Maka Ihe Ndị A Na-ese n’Akwụkwọ Anyị na Patasịn na-enweta foto ruru ihe dị ka puku abụọ na narị ise ma dowe ha n’ebe ha na-edowe foto. Ọtụtụ n’ime ha na-agba n’Ụlọ Nche na Teta! A gụkọta Ụlọ Nche na Teta! e bipụtara kwa ọnwa n’afọ 2015, ha dị otu narị nde na nde iri na ise. Anyị na-akpọ gị ka ị bịa n’ogige anyị dị na Patasịn, dị́ na Niu Yọk, legharịa anya ma ọ bụkwanụ n’alaka ụlọ ọrụ anyị dị iche iche ka i nwee ike ịmụtakwu banyere anyị.
Ebe Ndịàmà Jehova na-enyefe ndị mmadụ magazin n’ozi ọma
^ par. 2 A na-ese ọtụtụ foto ndị na-agba n’ihu akwụkwọ anyị, ma ọ bụghị ha niile ka a na-ewere. Ma, a na-edowe ndị ahụ a na-ewereghị n’ebe a na-edebe foto. Ha na-emecha gbaa n’akwụkwọ anyị n’oge ndị ọzọ.
^ par. 4 Ọ bụrụ na a chọrọ ịnọ n’okporo ámá see foto ndị ahụ ga-agba n’akwụkwọ anyị, Ngalaba Na-ahụ Maka Ihe Ndị A Na-ese n’Akwụkwọ Anyị na-anatakarị ikike n’aka ndị ọchịchị. Ha na-agwa ndị ọchịchị mmadụ ole ha ga-ese, ụdị ngwá ọrụ ha ga-eji ese ha, nakwa ụdị ọkụ ndị ha ga-eji ese ha.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Otú E Si Ese Foto Ndị E Ji Akọwa Ihe E Dere n’Akwụkwọ Anyị